Hamro Kantipur | अमेरिकाले २० बर्षमा अफगानिस्तानमा के हासिल गर्‍यो ? अमेरिकाले २० बर्षमा अफगानिस्तानमा के हासिल गर्‍यो ?
अमेरिकाले २० बर्षमा अफगानिस्तानमा के हासिल गर्‍यो ?
काबुल, अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाको फिर्ताको बचाउ गर्दै राष्ट्रपति जो बाइडेनले मंगलबार फेब्रुअरी २०२० मा ट्रम्प प्रशासनले तालिबानसँग सेना फिर्ता गर्ने सम्झौता गरेको बताएका छन् ।
यो सम्झौता पछि, उनीहरुसंग दुई विकल्प थिए – या त यो सम्झौता स्वीकार गर्ने वा युद्ध जारी राख्नको लागि अधिक सैनिकहरु पठाउने । बाइडेनले भने उनी एक अन्तहीन लडाई जारी राख्न चाहँदैनन्, न त उनी त्यहाँबाट बाहिर जाने योजनाको लागि जारी राख्न सक्दछन् ।
अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आफ्नो अभियान समाप्त गर्यो, तर यसले के पायो । अखबार, “द हिन्दू” अखबारले आफ्नो विश्लेषणमा लेखेका छन्, “बिडेनले मंगलबार भने कि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा तालिबानको शासनको कारणले होइन, तर ११ सेप्टेम्बरको आक्रमण अफगानिस्तानबाट भएको कारणले गरेको हो ।”
जुलाईको शुरुमा, बाइडेनले भने अमेरिका अफगानिस्तानमा एक राष्ट्र निर्माण गर्न गएको थिएन । अमेरिकाको प्रारम्भिक उद्देश्य अल कायदा लाई नष्ट गर्नु र ओसामा बिन लादेनलाई पक्रनु वा मार्नु थियो । तालिबान अमेरिकाको मुख्य शत्रु होइन र यसलाई पराजित गर्नु पनि प्राथमिकता नभएको उनको तर्क थियो ।
अखबारको विश्लेषण अनुसार, ” अमेरिका ९-११ को हमलाको कारण अफगानिस्तान गयो । तर बाइडेनले तालिबानको बारेमा के भनेका छन्, उनका पूर्ववर्तीहरुलाई त्यस्तो लागेन । डिसेम्बर २००१ मा तालिबानले बिना शर्त आत्मसमर्पणको प्रस्ताव राखेको थियो, तर जर्ज डब्ल्यू बुशले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे ।
“तालिबान शासनको विनाश पछि पनि अमेरिकाले अफगानिस्तान छोडेन । सन् २०११ मा ओसामा बिन लादेन मारिएपछि पनि अमेरिकाले अफगानिस्तान छोडेको थिएन । इस्लामिक गणतन्त्रलाई बचाउन जारी राखियो किनभने अमेरिकी नेताहरुलाई विश्वास थियो कि तालिबान को फिर्ता ले आतंकवाद को बिरूद्ध वैश्विक लडाई कमजोर हुनेछ ।”
द हिन्दूले आफ्नो विश्लेषणमा लेखेका छन्, “विगत २० बर्षमा तालिबान परिवर्तन भएको छ कि छैन भन्नेमा अझै विवाद छ । तर अमेरिकाको विदेश नीति यी २० बर्षहरुमा उल्लेखनीय परिवर्तन भएको छ । यदि अमेरिकाले देखेको छ कि तालिबानलाई सत्ताबाट हटाउने आतंकवाद बिरुद्धको लडाईमा एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्य थियो, तर २०२१ मा तालिबानको विजयपछि, अमेरिका आफैं त्यहाँबाट बाहिरिएको छ । बाइडेन सिद्धान्त अनुसार, तालिबान अब अमेरिकी नागरिकहरुको नभई अफगान नागरिकहरुको लागि एक समस्या हो ।एजेन्सी